पालुङ्टारमा रनिङ शिल्ड शुरु – Gorkha Sansar
पालुङ्टारमा रनिङ शिल्ड शुरु
गोर्खा संसार २०७६, ११ बैशाख बुधबार ०१:०३
गोरखा, १० बैशाख ।
पालुङ्टार नगर खेलकुद विकास समितिको आयोजना मा पालुङ्टार नगरपालिका वडा नं. ७ स्थित श्री जीवन ज्योति मा.वि. को खेल मैदानमा नगरपालिका स्तरीय आठौं राष्टपति रनिङ शिल्ड खेलकुद प्रतियोगिता २०७५ शुरु भएको छ । रनिङ शिल्ड आयोजक समितिका संयोजक एवं पालुङटार नगरपालिकाका नगरप्रमुख इ. दिपक बाबु कंडेलका सभापतित्वमा सम्पन्न उदघाटन समारोहमा प्रमुख अतिथिकोे रुपमा संघीय सभाका माननीय साँसद चुडामणि खडका प्रकाशले खेलकुदको विकासका दायरालाई फराकिलो पार्नुपर्ने बताउनुभयो । साथै उहाँले अहिले भइरहेको शैक्षिक पाठ्यक्रमले निजी विद्यालयहरुलाई प्रश्रय दिएकोमा त्रुटिपूर्ण रहेकोले सच्याउन जरुरी रहेको समेत बताउनुभयो ।
नगर प्रमुख कंडेलले कार्यक्रमको उदघाटन समारोहमा बोल्दै सम्बृद्धिको लागी सवै एक हुनुपर्ने बताउनुभयो । नगर उपप्रमुख पम्फा बसेलले विद्यालय स्तरीय खेल विकासमा योजना निर्माण गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयोे । त्यस्तै गरी पालुङ्टार नगरपालिका वडा नं ७ का वडाध्यक्ष एवं नगर खेलकुद विकास समिति पालुङ्टार का संयोजक बसन्त कुमार श्रेष्ठले नगरपालिका भित्रका सवै माध्यमिक विद्यालयहरुमा खेल शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
जीवन ज्योति मा.वि.का प्रधानाध्यापक बद्री बहादुर पाण्डेले स्वागत मन्तव्य राख्नुभएको सो कार्यक्रममा लक्ष्मी मा. वि. गाइखुरका प्रधानाध्यापक टिकाराम श्रेष्ठले शुभकामना मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।
आज समापन हुने खेलकुद प्रतियोगितामा पहिलो दिन (हिजो) १५०० मि. दौड, भलिबल लगायतका खेलहरु सम्पन्न भएका छन् । हिजो भएको पहिलो छात्र तर्फको भलिबल खेलमा अकला मा.वि. लाई लक्ष्मी मा.वि. गाइखुरले जितेको थियो त्यस्तै गरी दोश्रो खेलमा मदनेडाँडा मा.वि. लाई भवानी मा.वि. ले हराएको थियो । अकला मा.वि र लक्ष्मी मा.वि. बीच भएको तेश्रो खेलमा अकला मा.वि.लाइ हराउँदै भवानी मा.वि ले फाइनल प्रवेश गरेको छ ।
१५०० मि दौडको छात्रतर्फ अमर ज्योति जनता मा.वि. का सूर्य वि.क प्रथम, भवानी मा.वि. का विकास रानाभाट द्धितीय र जनता मा.वि.का सविन थापा तृतीय भएका छन भने छात्रा तर्फ लक्ष्मी मा.वि. की रोजीना जोशी प्रथम, भवानी मा.वि.की अञ्जिता अधिकारी द्धितीय र अकला मा.वि.की अञ्जना भट्ट तृतीय भएका छन् ।
३००० मिटरका दौडसहित अन्य खेलकुद तथा समापन समारोह आज हुनेछ ।
२०७५, ७ बैशाख शुक्रबार २०:०२